WBO barbadeessanii dhabamsiisuun ni danda’amaa? 5ffaa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWBO barbadeessanii dhabamsiisuun ni danda’amaa? 5ffaa
WBO barbadeessanii dhabamsiisuun ni danda’amaa? Kutaa shanaffaa
Berhanu Hundee, Caamsaa 24, 2020
Barreeffama kutaa sadaffaa fi afraffaa keessatti gaafii “Yeroo jaaramayootni hunduu karaa nagaatiin qabsaa’uu filatanitti, WBOn maaliif lola filate?” jedhu fi gaafiilee biroos, kan gaafii kana wajjin walittihidhannaa qaban, kaasee akka yaada fi laalcha kiyyaatitti deebii kennuu yaaleen ture. Dabalataanis haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru fi baay’ee yaaddessaa ta’e laalchisee gafii tokkos kaaseen ture. Innis, Nagaa fi tasgabbii dhabuun, booyuu fi dhiiguun uummata Oromoo hangamitti ittifufa? kan jedhu dha. Barreeffama kutaa shanaffaa fi xumuraa kana keessatti walumaagalatti dhimma nagaa fi nageenya Oromiyaa laalchisee akkasumas dubbii ijoo kan ta’e dhimma WBO, kan kutaalee afuriin dhiyaachaa ture, asirratti xumura.
Oromiyaa keessatti WBO dha moo humnoota birootu Shiftoota?
Nagaa fi tasgabbii uumuuf, wanta nagaa booressu beekuu fi furmaata isaa argachuu dha. Oromiyaa keessatti wantootni nagaa booressanii jeequmsa uuman maala akka ta’an sirriitti beekuun rakkisaa ta’ullee, wanti nama hin shakkisiisne tokko garuu biyya tana keessatti warri jeequmsa uumanii bu’aa irraa argatan ykn/fi daldala siyaasaa qaban waan jiraniifi. Kun amaluma biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti bareemee dha. Haa ta’u malee, Oromiyaa kan adda godhu fi jeequmsi uumamee, uummatni nagaa akka hin arganne taasisu, Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO)rraa sodaa waan qabaniifi. Motorri QBO immoo Sabboonummaa Oromoo ti. Sabboonummaan kan guddatu fi dagaagus uummata nagaa fi tasgabbii qabu keessatti. Kanaafuu Sabboonummaa cabsuuf; akkasumas QBO laaffisuuf; uummata beela fi gadadoo keessa galchuuf; diingadee uummataa laamshessuuf; dubartoota gudeeduuf; qabeenya saamuuf,… isaan kana hundaaf haalli akka mijatu jeequmsa uumuun barbaachisaa ta’a.
Sababa kanaaf karaa tokkoon hidhattootni eenyummaan isaanii hin beekamne (isaan kun tarii humnoota sirna durii deebisuu barbaadan ta’uu malu) Oromiyaa keessa socha’anii, uummata jeequdhaan WBOtu akkas godhaa jira akka jedhamu godhuun isaanii himamaa jira. Karaa biraatiin immoo, mootummaan mataan isaatuu duula WBO dhabamsiisuuf godhu qofaa osoo hin taane, shiroota biroos dalaguudhaan WBOtu akkas godhaa jira jedhee maqaa “Shiftaa Shanee” jedhu ittimoggaasee WBO maqaa xureessa. Miseensotni WBO shiftoota osoo hin taane ijoollee Oromoo warra Sabboonummaadhaan guutamanii dha. WBO dhabamsiisuu jechuun Sababboonummaa dhabamsiisuu dha. Sabboonummaa dhabamsiisuun immoo QBO dadhabsiisuu dha. QBO dadhabsiisuun gaafiin Oromoo akka deebii hin arganne taasisuu dha; haqa Oromoo awwaaluu dha. WBOn haqa Oromootiif uumame; haqa kanaaf wareegama kaffalaa jira; hiree ofii ofiin murteeffannaan uummata Oromoo akka mirkanaa’uf qabsaa’aa jira malee shiftaa miti. Dhugaa kana uummata Oromoo bal’aatu beeka.
Warri hidhatanii uummata keessa socho’an naannolee biraas jiru. Wanti naannoo Amaaraatti ta’e yaadannoo dhiyoo ti. Mootummaan garuu tarkaaniifii inni fudhate hin jiru. Oromiyaa keessatti garuu maqaa Labsii Yeroo Muddamaatiin, Komaandi Poostiidhaan uummata keenya dararaa jira. WBO sababa godhatee addatti Oromiyaa lixaa fi kibbaatti waraana labsee jira. WBO yeroo gabaabaa keessatti ni barbadeessina jedhanii erga dhaadachuu calqabanii wagga lama ta’ee jira; garuu WBO barbadeessuu dhiisii laaffisuullee waan danda’ame natti hin fakkaatu. Hanga Oromoon lafarraa dhumutti WBOn barbadaayee hin dhabamu. Osoo dadhabeyuu deebi’ee jabaata malee hanga gaafiin Oromoo karaa nagaatiin deebii hin argatinitti Oromoon kamuu WBO dha. Dhugaa kana firas ta’ee diinni beekuu qaba. Oromoo ta’anii garuu warri garaaf jedhanii, mootummaa PP kana jala kaattanii, WBO maqaa xureessuudhaan “Shiftaa” jedhan yeroon isin itti gaabban ni dhufa.
QBO keessatti qabsoon hidhannoo dhaabbachuu ni danda’aa?
Hanga jeequmsi Oromiyaa keessa jiru ittifufutti uummatni Oromoo nagaan jiraachuu hin danda’u. Karaa nagaatiin gaafii uummataatiif deebiin akka argamu kan yaalamu yeroo Darguu yeroo Dr Hayilee Fidaa faa mootummaa waliin hojjechuu yaalanii booda dhabamanii kaasee ti. Mootummaan impaayara tanaa dhufaa dabran amalli isaanii tokkuma. Impaayara humnaan ijaaramte tana keessatti, humnaan malee gaafiin Oromoo deebii argachuu hin danda’u. Kuni waraana labsuuf ykn olola oofuuf osoo hin taane, karaan biraa waan ijibbaatameefi. WBOn dirqameeti lola filate. Bilisummaa Oromoo argamsiisuun hafee, sanumaa asittuu yeroo obboleettiin ykn/fi haati isaa gudeedamtu fi dararama agartu; yeroo abbaan isaa salphatu fi dararamu ykn ajjeefamu, yeroo qayeen isaa gubattu fi qabeenyi barbadaa’u Oromoon taa’ee laalu jiraa? Yeroo badii kana hundaa argu namuu WBO ta’a. Hanga dararamni uummata Oromoo jirutti, hanga uummatni bal’aan kun hiree ofii murteeffachuu hin dandeenyetti qabsoon karaa kamiinuu ittifufa.
Filmaatni (election) nagaa fi haqa ta’e biyyattii tana keessatti godhamee, karaa kanaan gaafiin Oromoo deebii ni argata jedhanii yaaduun abjuu dha. Osuma godhameeyyuu filmaatni haqa ta’ee akka hin milkoofne; uummatni nama ykn jaarmayaa barbaadu akka hin filanne kunoo wanti ta’aa jiruu ragaa dha. Miseensotni jaarmayoota mormitootaa (akka warri zamanaa morkattootaa jedhan) keessumaayuu kan jaarmayoota Oromoo kan akka ABO, KFO fi PBO hidhamaa jiru; waajjirootni isaanii diigamaa fi saamamaa akka jiru himama. Egaa akkamitti filmaatni nagaa fi haqaa godhamee gaafiin uummataa deebii argachuu danda’a jedhamee yaadama? Kanaafuu filannoon (option) jiru karaa hidhannootiin dhiibbaa godhuu qofaa dha jedheen amana. Kanaaf immoo WBO jabeessuun barbaachisaa dha. WBOn dadhabullee, laaffatullee, deebi’ee jabaata malee barbadaa’ee dhabamuu gonkumaa hin danda’u. WBO jabeessuun bilisummaa argamsiisuuf qofaa osoo hin taane, bilisummaa boodallee nagaa fi nageenya Oromiyaa eeguuf human waraanaa biyyoolessaa (national army force) qabaachuun dirqama ta’a. Humna waraanaa cimaa qabaachuun akka nama kabachiisu Tigraayi akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda’ama.
Qabsoon bilisummaa, haqaa fi diimookraasii ni injifata!!!
Hanga dhimma birootiin walitti deebinutti nagaatti.